မုတ်သုံက သာမန်နှစ်များနှင့်မတူပဲ ဒီနှစ်မှ နောက်ကျလွန်းနေသည် ။ တလှပ်လှပ်ထနေသော ကတ္တရာ လမ်းမထက် အပူရှိန်က အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ တောက်လောင်နေဆဲ ။ ပြင်ပအပူရှိန်သည် ရင်ထဲက ဖြစ်ပေါ် နေသော လွမ်းဆွတ်မှု ဒါဏ်ရာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြူမှုံတမျှ ဝေးလွင့်သွားစမြဲပင် ။ မျက်..၀န်း..နက်... ဒီနာ မည်လေး တစ်ခုနဲ့တင် ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်သေခဲ့ရပါတယ် ။ မျက်ဝန်းနက်ဆိုတာ သူမရဲ့ နာမည် အရင်း မဟုတ်ပါဘူး ။ သူမနဲ့ စတွေ့တိုက်အခိုက်လေးမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်တွေ တလှပ်လှပ်နဲ့ ဘာမှန်းမသိပဲ နှုံးခွေ သွားတတ်ပြီး အာရုံထဲမှာ မျက်ဝန်းနက်နက်လေးတွေပဲ စွဲကျန်ရစ်ခဲ့တယ် ။ သူမက ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်ဦး တည်း သော မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းဖြစ်သလို ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး ချစ်သူလည်းဖြစ်ခဲ့တယ် ။ သူမ အကြောင်းတွေ ပြန်တွေးမိတိုင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေ မှုမမှန်ပဲ ဗြောင်းဆန် လှုပ်ရှားသွား တတ်တာ ကိုတော့ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံပါရစေ ။ မိုးရာသီရောက်တိုင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်တွေနာကျင်ရစမြဲပါ ။ သူမနဲ့ ကျွန်တော့် ရဲ့တွေ့ဆုံမှုက မိုးရာသီမှာ စတင်ခဲ့သလို မိုးတွေ သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာနေတဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုမှာပဲ သူမ ကျွန်တော့်ကို ခွဲခွာသွားခဲ့တယ် ။
အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ သိလိုက်ရချိန်မှာ သူနဲ့ကျွန်တော်က ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့ ၀န်ရိုးစွန်း တစ်ဖက် စီမှာ ရောက်ရှိနေပြီလေ ။ အခုတော့ မိုးတွေလည်း ရွာမနေခဲ့ဘူး ။ ပြင်းပြတဲ့ နေရောင်ကြောင့် ကိုယ်ပေါ် မှာ ပူရှိန်းရှိန်းဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအုံ့ ဆွေးဆွေးနဲ့ သူမကို လွန်းတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အကျင့်ကိုလည်း မဖျောက်ဖျက်နိုင်ခဲ့ဘူး ။ အခုလည်း မေလရဲ့ပူပြင်းတဲ့ နွေနေ့လည်ခင်းမှာ သူမရဲ့ အကြောင်းကို ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ စာရွက်ဖြူဖြူတစ်ရွက်ပေါ် ကျွန်တော်ချရေးနေမိတယ် ။
" လွမ်းလိုက်တာ မျက်ဝန်းနက်ရယ် ...."
ကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ် ။ အဲဒီမိုးတွေရွာသည်းနေတဲ့ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်က ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ မိုးရေ ထဲမှာ မျက်နှာပေါ် မိုးစက်တွေလာမှန်တဲ့ အရသာကို နှစ်ခြိုက်လွန်းတဲ့အတွက် မိုးရေထဲ လမ်းလျောက် နေ မိတယ် ။ အပေါ်ကို မော့ကြည့်မော့ကြည့်နဲ့ လျောက်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ကို နောက်က တစ်စုံတစ်ခုက အရှိန်ပြင်း ပြင်းနဲ့ ၀င်တိုက်လိုက်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကတ္တရာလမ်းပေါ် ဗိုင်းကနဲ ပစ်လဲကျသွားခဲ့တယ် ။
ကျွန်တော်လည်း ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို တိုက်သွားတဲ့အရာကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန် တော့် အသွေးအသားတွေကို ခေတ္တခဏ ရပ်တန့်သွားစေတဲ့ မျက်ဝန်းနက် နဲ့ စတင်တွေ့ဆုံရတာပါပဲ ။ မိုးတွေ ထဲမှာ စက်ဘီးလေးကိုင်ပြီး တုန်တုန်ရီရီနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ။ အဲဒီဖြစ် ရပ်လေးကနေစတင်ပြီး မျက်ဝန်းနက် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ စတင်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ် ။ မိုးတွေ အုံ့အုံ့သည်းသည်းရွာသွန်းတဲ့ နေ့ရက်တိုင်းဟာ သူမနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အမှတ်ရစရာ နေ့ရက်တွေချည်းပါပဲ ။ မျက်ဝန်းနက်က ကျွန်တော်နဲ့ စတွေ့ပြီး ရက်ပေါင်း ၉၉ ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ ကျွန်တော့်ကို " သိပ်ချစ်တယ် " ဆိုတဲ့ အဖြေကို ပေးခဲ့တယ် ။ အဲဒီအဖြေဟာ မုသားတွေနဲ့ ရောနှောနေတဲ့ အဆိပ်ရည်တစ်ခွက် မှန်း ကျွန်တော် မသိခဲ့ဘူး ။ အဲဒီအဆိပ်တွေကပဲ ကျွန်တော့်နှလုံးသားတွေ အတုံးအရုန်းကျဆုံးကုန်အောင် လောင်ကျွမ်း စေခဲ့တာ ပေါ့ ။
" လွမ်းလျှက်ပါပဲ မျက်ဝန်းနက်ရယ်...."
ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို တစ်ရက်မှမေ့မရခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ မိုးပြိုမှာစိုးတဲ့ တစ်တီတူးတွေလို တစ်စုံ တစ်ခုကြောင့်ဝေးလွင့်သွားမှာ စိုးတာကြောင့် တစ်ယောက်လက်နဲ့ တစ်ယောက် ခိုင်မြဲစွာ တွဲခဲ့ကြတယ် ။ ဘယ်အရာကမှ ခွဲလို့မရအောင် ခိုင်မြဲလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်တစ်စုံကို သူမဖက်က စတင် ဖောက်ဖျက်သွားတာဟာ သူမရဲ့ ဘာမဟုတ်တဲ့ အတ္တလေးတစ်ခုကြောင့်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိလိုက်ရ တဲ့ အချိန်မှာ လောကကြီးကို မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး ။ " မျက်ဝန်းနက်ရယ်.. ခင်ဗျားရက်စက်တယ် " လို့ ကျွန်တော် ပြောမထွက်ခဲ့ဘူး ။
နေ့တစ်နေ့ပေါ့... ။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က မိုးတွေသည်းကြီးမည်းကြီး ရွာတဲ့ တနင်္ဂနွေတစ်နေ့ရဲ့ ညနေခင်း တစ်ခုပေါ့ ။ ဘာမှမထူးခြားတဲ့တစ်နေ့ ... ။ ကျွန်တော့်ကို သေမိန့်ချခဲ့တဲ့နေ့ ... ။ ကျွန်တော်နဲ့ မျက်ဝန်းနက် စ တွဲခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီး ၉ လနဲ့ ၉ ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့ ။ ၉ ဂဏန်းတွေဟာ ကံကောင်းခြင်းကို ယူဆောင် လာပေးတယ်ဆိုပြီး ဘာကြောင့် ကျွန်တော့်အလှည့်ကျမှ လွဲချော်ခဲ့ပါသလဲ .... ။
" မောင်...ကျွန်မ.. နိုင်ငံခြားသွားတော့မယ် ဒီမှာနေလို့ ကျွန်မရဲ့ ဘ၀က ဘယ်လိုမှ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု လမ်းကြောင်းကို ရှာတွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး မောင်ကျွန်မကို တကယ်ချစ်ရင် နိုင်ငံခြားကို အပြီးလိုက်ခဲ့ပါလားဟင် "
အဲဒီစကားသံကြားကြားချင်း ကျွန်တော်ဟာ ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို ဆွံ့အသွားခဲ့မိတယ် ။ ဒီနိုင်ငံကနေ ခဏ တဖြုတ် မဟုတ်ပဲ အခြားနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားခံယူရမယ့်ဘ၀.. ကိုယ့်အမိရင်ခွင်ကို ကိုယ်ခြေစုံကန်ရသလိုပါပဲ ။ ကျွန်တော်ဆက်မတွေးရဲတော့ဘူး ။ နောက်ဆုံးပင့်သက်ကိုရှိုက်ပြီး သူမကို တစ်ခွန်းပြန်မေးလိုက်တယ် ။
" ကျွန်မတို့ တစ်သက်လုံးဝေးကြယုံပဲပေါ့ မောင်...စဉ်းစားပါဦး "
ကျွန်တော်နောက်ဆုံး ရင်နဲ့ ရင်းတဲ့ ဆုံး ဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချလိုက်ပါတယ် ။
(၁) ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ မဟုတ်ပဲ အခြားနိုင်ငံခြားသားဘ၀ ခံယူပြီး ချစ်သူနဲ့အတူနေရခွင့်
(၂) ချစ်သူကို လက်တွဲဖြုတ်ပြီး အမိရင်ခွင်ထဲမှာ ကျန်နေခွင့်
ကျွန်တော် ဒုတိယ အရာကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ် ။
" ကိုယ်မလိုက်နိုင်ဘူး "
" ဒီမှာမောင်.. ဘာမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံသေးသေးလေးမှာပဲ မောင့်ဘ၀ကို မြှုပ်နှံပြီးနေရစ်ခဲ့ပေတော့ ကျွန်မကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မပြင်နိုင်တော့ဘူး တကယ်တော့ မောင်ဟာ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားလိုပဲ ဒီပတ်ဝန်း ကျင်လေးကိုပဲ အရမ်းတွယ်တာလွန်းတယ် ဆောရီးပဲ မောင် ဒီနေ့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းနေ့ပေါ့ ...Good Bye.."
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခင်ဗျားတို့ မှားတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ် ။ သတ္တိမရှိသူလို့ လည်း စွပ်စွဲချင်စွပ်စွဲလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီရေဒီမြေကနေခွာပြီး တိုင်းတပါးသားဘ၀ ခံယူဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော့် ၀ိဥာဉ် တစ်ခလုံး လွင့်ပြယ်သွားမှ ဖြစ်နိုင်မှာပါ ။ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ကျွန်တော့်ရင်တွေအခုထိ...နာကျင်ဆဲပါ ။ ကြေမွဆဲပါ... ။ နောက်ဆုံး သူမရဲ့ Email လေးတစ်ခုတောင် ကျွန်တော်သိခွင့်မရခဲ့ဘူး ။ အခုလောက်ဆို မျက်ဝန်းနက် ... နိုင်ငံခြားသူကြီး ဖြစ်နေလောက်ရောပေါ့ ။ သူမ ရှာဖွေနေတဲ့ ဘ၀ တိုးတက် အောင်မြင် ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း တွေ့နေလောက်ရောပေါ့ ... ။
ကျွန်တော်ကတော့ အခုထက်ထိ.. ကဗျာတွေရေးနေတုန်း .. အဆုံးမဲ့ညတွေထဲ သူမနာမည်ကို ရေရွတ်နေ တုန်း.... သူမရဲ့ အမှတ်တရတွေကို သိမ်းထားတတ်နေတုန်း...သူမအတွက် အလွမ်းဖွဲ့တေးသီချင်းတွေ ဆိုညည်း မိနေတုန်း......
မျက်...၀န်း...နက်...ရေ...ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်ဆက်လက် စောင့်မျှော်နေဆဲပါ....နောက်ထပ် ဘ၀တွေ.. အသင်္ချေ...အသင်္ချေ...အသင်္ချေ....ထိတိုင်အောင်...............။
saw May 26, 2010 at 10:16 AM
is itatrue story that you or somebody had or is it your imagination?
I read one story in which the guy wanted to take his girlfriend to US but the girl denied and stayed in MM
saw May 26, 2010 at 10:23 AM
Nice plot! I feel unmentionable pain in my heart.
သဒ္ဓါလှိုင်း May 26, 2010 at 11:41 AM
Vista May 26, 2010 at 12:28 PM
Facebook မှာခေါက်လိုက် ထွက်လာမယ် ...
အဖြူရောင်နတ်သမီး May 26, 2010 at 12:48 PM
မောင်ဘကြိုင် May 26, 2010 at 1:22 PM
မိုးငွေ့...... May 26, 2010 at 1:41 PM
ဒီစာလေးဖတ်နေချိန်မှာ မိုးကလဲ သည်းကြီးမဲကြီးရွာနေတယ် စိတ်မကောင်းလိုက်တာ..။
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ May 27, 2010 at 10:06 AM
Vista ပြောသလိုပဲ.... များသောအားဖြင့်တော့ရှာတွေ့တတ်တယ် သူငယ်ချင်းရေ....
Thein February 7, 2011 at 5:00 PM
phyusinthant January 27, 2012 at 10:00 PM
“ကျွန်တော်” ဆိုတဲ့သူရဲ.ဆုံးဖြတ်ချက် လုံးဝမမှားဘူး။အမိနိုင်ငံ ကိုချစ်တဲ့စိတ် ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့အတွက် “ကျွန်တော်” ဆိုတဲ့သူကိုယ်စား
“ကျွန်မ” ဆိုတဲ့ဖြူစင်သန်. ကအရမ်းကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။